I-Coy Fisherman's Cottage Pet Friendly
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDanielle
Indlu yabalobi epholileyo enayo yonke into oyifunayo kwindawo emnandi egcweleyo esecaleni lolwandle.
Ngaphantsi kwe-350m ukusuka elunxwemeni kufuneka nje ubambe itawuli yakho kwaye uhambe. Olu lwandle lukwayiyo nenja. Nje ukuba ukhulise umdla wokutya kwintloko ye-surf ukuya kwiTavern ekufutshane ne-500m yokuhamba ukusuka kule ndawo.
I-1100sqm yomhlaba enendawo eninzi yabantwana/izinja zokuphonononga ngaphandle kokushiya iyelenqe. Kananjalo inocingo olubiyelweyo ukuze ezo tyke zingabi kude kakhulu.
Nge-reverse cycle A/C ungahlala upholile ehlotyeni okanye upholile ebusika. Iingubo ezininzi ezibonelelweyo zithobe phantsi esofeni kwaye wenze eyona ngqokelela yethu enkulu yeDVD okanye ukufikelela kwiNetflix, uStan, kunye neTelstra TV ngokungena kwakho.
Impahla egcweleyo kunye neline yokunxiba, umgubo wokuvasa kunye nesithambisi zibonelelwe ngoko akukho mfuneko yokupakisha isinki yasekhitshini, okanye uzikhathaze ngokungcolisa.
Ngegadi ebiyelweyo ngasemva ngokupheleleyo ukuba nezona zinja zizinja zifuna itrampoline ukuze zidlule, apho zinokugrumba kumxholo weentliziyo zabo.
Izilwanyana zasekhaya zamkelekile ngaphakathi endlwini. Sinebhedi yenja kunye nezitya ezimbini zokutya ezinokubonelelwa ukuze zihlale zikhululekile. Siyacela nje ukuba bahlale ngaphandle kwefenitshala kwaye ulande emva kwabo.
4.76 ·Izimvo eziyi-177
4.76 · Izimvo eziyi-177
Kwi-350m kude nolwandle kufuneka nje ubambe itawuli yakho kwaye uhambe. Olu lwandle lukwanobuhlobo nenja ukuze ukwazi ukuza nabahlobo bakho abanoboya kunye nawe. Nje ukuba ukhulise umdla wokutya kwi-surf yenza indlela yakho eya kwiTavern ekufutshane ne-500m yokuhamba ukusuka kule ndawo. Ke akukho mfuneko yentlawulo yeteksi ukuba ufumana kancinci 'uhlaziyeke kakhulu' :0)
Thatha ukhenketho lwephenyane kwaye ufumane amava eengonyama zoLwandle lwaseGreenhead, uhambo olufutshane ukusuka endlwini. Ndinqwenela into eyoyikisayo ngakumbi, funda enye ye-adrenaline junkies edolophini kunye neparashute ngaphezulu kwemibala emihle yeJurien Bay. Ufuna ukuba nesibindi kodwa ugcine iinyawo zakho emhlabeni ... uhlolisise iindunduma zesanti zasekhaya okanye i-Stockyard Gully Cave! Yenza i-splash kunye ne-snorkel kwi-reef ejikelezileyo, okanye ubambe intonga kwaye ubambe isidlo sakusihlwa!
Unqwenela into ekude, jonga iiPinnacles ngaphantsi kwe-40 mins umnyango nomnyango kwaye ungene 'kwi-Lobster Shack' usendleleni egodukayo! Akukho sidlo sasemini sipakishwayo esifunekayo!
Awuyi kuzifumana unesithukuthezi!
Siyayiqonda indlela imfihlo ebaluleke ngayo, ngakumbi xa sikwiholide. Ngoko zive unqabisekile kukwazi ukuba akuyi kuphazanyiswa. Nangona kunjalo ukuhlala edolophini kusivumela ukuba sibekho kuyo nayiphi na imiba enokuthi ivele kwiyure. Ngoko zive ukhululekile ukufikelela kuyo nayiphi na imibuzo.
Siyayiqonda indlela imfihlo ebaluleke ngayo, ngakumbi xa sikwiholide. Ngoko zive unqabisekile kukwazi ukuba akuyi kuphazanyiswa. Nangona kunjalo ukuhlala edolophini kusivumela ukub…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jurien Bay